Daddaaqaama siyaasaa yeroof nu muudateen aarsaa yeroo dheeraaf kaffaallee gatii hin dhabsiisnu
Daddaaqaama siyaasaa yeroof nu muudateen aarsaa yeroo dheeraaf kaffaallee gatii hin dhabsiisnu Caamsaa 31/2019 Laabsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo waamicha Ajaaja olaanaa WBO Irraa dhihaate hordoofun bahee Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo siyaasaa gaggeessaa turee dhaaba isaa ABO jalaatti hiriiruun hanga har’aatti… Read More »
Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Shanaffaa Berhanu Hundee, Caamsaa 31, 2019 Barreeffama kutaa afraffaa keessatti adeemsi ODP fi hojii isaan dalagaa jiran QBO ni gargaara moo gufuu itti ta’aa jira? jedhee gaafii… Read More »
Why Dr. Abiy does not have committed constituents despite his popularity, poetic preach, and good mannerism?
Why Dr. Abiy does not have committed constituents despite his popularity, poetic preach, and good mannerism? By Abbaa Ormaa, PhD, May 31, 2019 Xoollay is the new Qilinxoo where Oromos are tortured and poisoned. Xoollay is the new Qilinxoo where… Read More »
WALIIGALTEE ABO fi MOOTUMMAA – IBSA KOREE TEEKNIIKAA / የኦነግና የመንግስት ስምምነት – የቴክኒክ ኮሚቴ መግለጫ
WALIIGALTEE ABO fi MOOTUMMAA – IBSA KOREE TEEKNIIKAA / የኦነግና የመንግስት ስምምነት – የቴክኒክ ኮሚቴ መግለጫ Berhanu Hundee /ብርሃኑ ሁንዴ Waliigaltee ABO fi Mootummaa laalchisee waan Koreen Teekiniikaa kaleessa ibserratti gaafiileen qaba. Miseensota WBO kan yeroo ammaa bosona jiraniin gala… Read More »
Raadiyoo Bilisummaa, Caamsaa 30, 2019 Listen to “RB-Xiyyeeffannoo 31-05-2019” on Spreaker.